पुनर्बिमाको सेयर, सिडिएसको गाइजात्रा र मुकदर्शक धितोपत्र बोर्ड | NewsKarobar
गृहपृष्ठ पुनर्बिमाको सेयर, सिडिएसको गाइजात्रा र मुकदर्शक धितोपत्र बोर्ड
सेयर बजार बढ्नु र घट्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिइन्छ । सूचना, आर्थिक गतिविधि र नियम कानुनलाई प्रदर्शित गर्नु र सोहीअनुसार घटबढ हुनु सेयर बजारको स्वfभाविक चाल मान्न सकिन्छ । तर, स्वाभाविक रुपमा चल्ने सेयर बजारभित्र अस्वाभाविक गतिविधि भई लगानीकर्ता मर्कामा परिरहँदा यसको नियामक अस्वाभाविक रुपमा मुकदर्शक बन्छ भने त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । बजारमा क्लोज आउटको समस्या वर्षौंदेखि छ । जसका कारण एकथरी लगानीकर्ताले करोडौं पैसा गुमाइरहेका छन् भने अर्कोथरीले अवसर गुमाइरहेका छन् । क्लोज आउटको रेखा हरेक दिन बढ्दै जाँदा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) चुप लागेर बस्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
नेप्से र बोर्डको यो मौनताले पाडो पाए पनि पाडी पाए पनि गोठालालाई विगौती भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्छ । क्लोज आउट भए पनि नभए पनि नेप्से र बोर्डले आफ्नो कमिसन सुरक्षित गरिरहेकै हुन्छन् । यसैले यी निकाय बजारको स्वच्छन्दताभन्दा पनि आफ्नो कमिसनको रेखा र बोनसका अंक गणनामै व्यस्त भएको देखिन्छ । यति मात्र नभई बजारमा लगानीकर्ताका सयौं समस्या बग्रेल्ती छन्, जसको समस्यामा धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीले १० मिनेट खर्च गर्न सकेको देखिँदैन तर दिनमा १० वटा अनलाइन पत्रिकालाई नेप्सेका रेखाको विश्लेषण गर्न भने उनलाई भ्याइनभ्याई भएको देखिन्छ ।
१. नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर आवेदन खुला गरिएको छ । यस्तै अन्य कम्पनीका ऋणपत्र तथा हकप्रद सेयर पनि खुलेका छन् । तर, मेरो सेयरको प्रणालीमा कुनै पनि निष्कासनमा सेयर (ऋणपत्र) खुला र बन्द हुने नेपाली मिति राखिएको छैन । हरेक नेपालीले पहिला नेपाली गते भन्छन्, बुझ्छन् । यसले यी निकाय कतिसम्म हेलचेक्र्याइँ गर्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
२. मेरो सेयरको आस्वामा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर आवेदनका लागि खुला मिति सन् २०२० मार्च १७ बिहान १२ बजेर १५ मिनेट दिइएको छ । किन १२ बजेर १५ मिनेट ? बिहान १२ बजे किन खुला नहुने । यस्तै अर्को हास्यास्पद कुरा बन्द हुने मिति सन् २०२० मार्च २० को बिहान ७ बजेर १५ मिनेट दिइएको छ । यसको अर्थ सेयर खुला बिहान ७ बजेर १५ मिनेटमा नै बन्द हुँदै छ । अर्थात् मार्च २० गते लगानीकर्ताले दिनभर सेयर भर्न पाउँदैनन् । यस्तै गाइजात्रा नबिलको ऋणपत्र र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रदमा पनि देखिएको छ । एनएलजीको हकप्रदको खुला मिति मार्च ३ तारिख बेलुका ११ बजेर १५ मिनेट भनिएको छ ।
पुनर्बिमा कम्पनीको प्राथमिक निष्कासनमा आवेदन गर्नका लागि मार्च २० छिटोमा बन्द हुने मिति हो तर सिडिएसले उक्त कुरा खुलाएको छैन । यसको प्रणालीमा तीनवटै जस्तो खुला हुने, छिटोमा बिक्री बन्द र ढिलोमा बिक्री बन्द हुने मिति किन नराख्ने ? भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिँदा बिक्री बन्द हुने समय बैंकिङ समयपश्चात् भनेको छ । सेयर आवेदन अनलाइनमार्फत दिइन्छ । अनलाइनमा बैंकिङ समय भन्ने हुँदैन । चौबिसै घन्टा चलिरहेको हुन्छ । आवेदकले चौबिसै घन्टा सेयरका लागि आवेदन दिइरहेका हुन्छन् । सेयरको अनलाइन आवेदन सुरु भएको यतिका समय बितिसक्दा यति कुराको समेत अनुसन्धान गरेर परिवर्तन गर्न नसक्नु सिडिएस कम्पनीको लाचारी त छँदै छ, नियामक धितोपत्र बोर्डको यथास्थितिबाद पनि उदेक लाग्दो छ । सर्वसाधारणका गुनासा र समस्या रद्दिको टोकरीमा फाल्ने बोर्ड र नेप्सेको प्रवृत्तिकै कारण बजारको विकास निरन्तर हुन नसकेको हो ।
बजारका माग वा आवश्यकता के जायज हुन् वा होइनन् भनेर छलफल र बहस नगर्ने र समस्यालाई गिजोलेर छाड्ने प्रवृत्ति धितोपत्र बोर्डमा देखिन्छ ।
आस्वामार्फत सेयर आवेदन दिँदा आवेदन दिने समयलाई परिभाषित गर्नुपर्छ । जस्तो अनलाइन आवेदन बिहान १२ बजे खुल्ने र रातको ११ बजेर ५९ मिनेटमा बन्द हुने भन्ने हुनुपर्छ । तर, अनलाइन आवेदन नदिई बैंकमा गएर आवेदन दिने हो भने दिउँसोको ३ बजेसम्म भन्ने हुनुपर्छ । यो आगामी निष्कासनमा देखिनुपर्छ ।
३. हकप्रद सेयरमा हक हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधान छ । यसको अर्थ आफूले किन्न पाउने हकप्रद सेयर भर्न नचाहे अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने भन्ने हो । यस्तो हक हस्तान्तरण डिम्याट खाताको आश्वामार्फत नै गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हकप्रदको आवेदनसँगै हक हस्तान्तरणको प्रावधान राखिनुपर्छ र हक दिनेले हक पाउनेको डिम्याट खाता उल्लेख गरेर हक हस्तान्तरण गरेपछि हक पाउनेले त्यसलाई स्वीकार गरी आवश्यक शुल्क र हकको पैसा तिरेसँगै हक हस्तान्तरणको काम सकिने हुनुपर्छ । तर, धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको यो अपेक्षालाई पनि सुनेको नसुन्यै गरेको छ । बजारका माग वा आवश्यकता के जायज हुन् वा होइनन् भनेर छलफल र बहस नगर्ने र समस्यालाई गिजोलेर छाड्ने प्रवृत्ति धितोपत्र बोर्डमा देखिन्छ । जुन नयाँ अध्यक्षले समाधान गर्ने हुन् वा अझ गिजोलेर छाड्ने हुन् हेर्न धेरै कुर्नु पर्दैन ।
४. बिक्री नभएको हकप्रद सेयर मूल्य बढाबढमा बिक्री गरिन्छ । तर, मूल्य बढाबढ प्रक्रिया काठमाडौंमा सीमित छ । यो प्रक्रियामा देशभरका लगानीकर्ताले भाग लिन पाउनुपर्छ भनेर वर्षौंदेखि कुरा उठिरहेको छ । बिक्री नभएको हकप्रद मूल्य बढाबढमार्फत बिक्री गर्दा हुने बदमासी र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्न धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म सर्वसाधारणको अपेक्षालाई सम्बोधन गरेको छैन । यसलाई पनि आस्वामार्फत नै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ र खातामा भएको पैसा बराबरको चाहेको मूल्य तोकेर आवेदन दिन सकिने हुनुपर्छ । यो तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।
दिनमा १० वटा मिडियामा नेप्सेको रेखाको विश्लेषण गर्न भ्याउने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले लगानीकर्ताका यावत् समस्या समाधानमा १० मिनेट खर्च गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसको मूल्यांकन बजारको विकासको रेखाले हरेक दिन गरिरहेको हुनेछ ।
प्रकाशित समय ११:५१ बजे
पछिल्लाे - कोरोना संक्रमण : एनआरएनएले बोलायो आकस्मिक बैठक
अघिल्लाे - युवा विदेशिएपछि सोरठी जोगाउन समस्या